Wholesale 360 ​​Yakazara Dziviriro yeMuviri Combo ye iPhone 12 Mugadziri uye Mutengesi | OTAO
● 360-degree Yakazara Dziviriro. Yakasangana ne1 back cover uye 1 furemu ine yakavakirwa-mukati skrini inodzivirira, iyo 2 mu1 Combo inovimbisa zvakakwana kudzivirirwa kwefoni yako kubva mukukwaya, matanga uye zvigunwe zvemunwe, zvakare kunoita kuti foni yako ichengeteke kubva kune zvinokanganisa kana zvinosiririsa madonhwe.
● Ultra-yakatetepa & Chiedza. Ultra yakatetepa uye isingaremi kesi inochengeta iyo chaiyo yekunzwa foni yako uye haiwedzere chero hombe hombe yekutakura muhomwe kana muhombodo nyore. Iwo mativi ane musanganiswa weunyoro uye kuomarara zvinopa vashandisi ruoko rwakanakisa kunzwa uye kubata kwakachengeteka.
● Yakasarudzika Dhizaini. Yakagadzirirwa chaizvo iPhone, kesi yacho inokodzera chaizvo pamusoro pemabhatani evhoriyamu, mabhatani anoshanda, uye makakombama efoni yako. Premium yakadzikama girazi screen chengetedzo inovimbisa yakashata kubata, nyore kuwana zvese maficha uye mabhatani pasina kubvisa iyo kesi.
● Wireless Kubhadharisa Rutsigiro: .Inotsigira isina waya kuchaja pasina kubvisa iyo foni kesi. Chiedza chakareruka uye chakaringana chiteshi chinopa kuvandudza mashandiro.
Kuisirwa kweOTO yakadzora firimu iri nyore kwazvo uye nyore. Kana iwe uri kufunga nezve iyo terminal, iwe unogona zvakare kusarudza yedu yekushandisa (inonzi zvakare yekuisa tireyi) kubatsira iyo yekuisirwa. Kunyangwe mutengi asina ruzivo rwemufirimu anogona nyore kuisa firimu pairi.
Pashure: iPhone 12 dzakateedzana 2.5D zvakavanzika zvinodzora girazi screen mudziviriri
Zvadaro: iPad Pro 11 ″ 2020 Yakapusa Girazi Screen Dziviriro
iPhone 12 akateedzana 2X shatterproof yakatsamwa girazi ...
2.5D Anti Bhuruu Mwenje Wakatsamwa Girazi Screen Prot ...
iPhone 12 akateedzana 3D anti mabhakiteri akatsamwa gla ...
2.5D High Clear Anti-Guruva Wakatsamwa Glass Screen ...